Tag: Hoose | Sagal Radio Services
Duqeyn dad rayid ah ku geeriyoodeen oo ka dhacday Jubadda Hoose
Sagal Radio Services • News Report • October 19, 2018
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in diyaarad dagaal xalay duqeyn ka geysatay deegaanka Buulo Xaaji oo qiyaastii 90KM u jirta magaalada Kismaayo.
Mareykanka oo weeraro cirka oo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay Shabeellaha Hoose
Sagal Radio Services • News Report • September 13, 2017
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africa (Africom) ayaa sheegay in saddex weerar oo dhinac cirka ah ay maanta ka fuliyeen Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo lagu bartilmaameedsaday saldhigyo Al-Shabaab.
Al-shabaab oo sheegtay inuu dagaal kula wareegay deegaanka Kulbiyoow ee gobolka Jubbada Hoose
Sagal Radio Services • News Report • January 27, 2017
Wararka ka imanaya deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ururka Alshabaab uu weerar ku qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada AMISOM magaalada Kulbiyow.
Diyaarado dagaal duqeeyay fariisimo Al-Shabaab ku leeyihiin Toora-Toorow
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo aan la ogeyn dalka laga leeyahay ay duqeeyeen fariisimo Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Toora-Toorow.
Faah faahin ka soo baxaya duqeyn ka dhacday deegaan hoos-taga degmada Afgooye
Sagal Radio Services • News Report • May 14, 2016
Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ayaa sheegaya in diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano Helicopter ay shalay duqeyn ka geysteen deegaanka Furuqley oo 25KM dhinaca waqooyi kaga beegan Afgooye.
Faah-faahin dheeraad ah oo ka soo baxeyso Duqeyntii Cirka ee Shabellaha Hoose
Pentegonka mareykanka ayaa laga soo xiganayaa in mareykanku duqeyn xaga cirka ah uu kafuliyay gobolka shabelada hoose goobo ay kaga suganyihiin hugaamiyaasha Al-shabab ,balse pentagon-ka mareykanku ma’uusan cadeenin in howlgalkan uu guuleystay ama uu fashilmay.
Ciidamada Kenya oo lagu eedeeyay inay shacab ku xasuuqeen Jubada Hoose
Ciidamada Kenya ee jooga dalka Soomaaliya, ayaa lagu eedeeyay inay xasuuqeen shacab Soomaaliyeed oo reer miyi ahaa, ka dib markii ay si bareer ah u toogteen 7 ruux.